हामीले बोलेनौँ भने अर्को पिँढीलाई पनि यौन दुर्व्यवहार भइरहन्छ - Everest Dainik - News from Nepal
हामीले बोलेनौँ भने अर्को पिँढीलाई पनि यौन दुर्व्यवहार भइरहन्छ
काठमाडौं, साउन १२ । करिब दुई हप्ताअघि पत्रकार बिनु सुवेदीले सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा दाइहरूको डर शीर्षकमा एउटा ब्लग लेखिन्।
उक्त विषयमा बोल्ने आँट गरेको भन्दै कतिपयले प्रशंसा गरेको र कतिपयले चाहिँ नाम उल्लेख गर्न नसक्नेले किन लेखेको भनी प्रश्न गरेको सुवेदीले बताइन्।
नाम उल्लेख गरेर के भयो त आरोपितमाथि कुनै अनुसन्धान वा कारबाही खोई ?
नाम उल्लेख गर्न नसक्नेले लेखेर के हुन्छरु वा हुँदै नभएको लेखेको पो हो कि ?
१५ वर्षअघि तत्कालीन नगरप्रमुखले आफूलाई गरेको दुर्व्यवहारबारे गत वर्ष बोलेकी काठमाण्डू महानगरपालिकाकी पूर्वकर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले भनिन्, मैले बोलेपछि नकारात्मक कुराहरू हुन्छन्, मैमाथि उत्रिनेहरू हुन्छन् भन्ने लाग्दा लाग्दै पनि मैले दुर्व्यवहारबारे बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर श्रीमान्‌सँग सल्लाह गरेरै बोलेकी थिएँ।
याे पनि पढ्नुस रोकिराखेको बसभित्र सहचालकले गरे दुई बालिकामाथि दुर्व्यवहार
ूतर कम्तीमा बहसमा ल्याउनका लागि र अरू पीडितलाई आफूविरुद्धको दुर्व्यवहारको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि बोल्न आवश्यक छ। कम्तीमा त्यसले पीडकमाथि कारबाही नभए पनि उनीहरू सतर्क हुन्छन् प्रजापतिले भनिन्।
उनले भनिन्, सकारात्मक कुरा भनेको महिलाहरू बिस्तारै बोल्न थालेका छन्। यसमा नाम उल्लेख गरेको वा नगरेको भनेर मुद्दा बनाउन जरुरी छैन। दुर्व्यवहार जस्तो संवेदनशील विषयलाई बहसमा ल्याइएको ल्याइएन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो।
पत्रकार सुवेदीको अनुभवमा उनले नाम उल्लेख नगरी दुर्व्यवहार गर्नेहरू आफूले ुदाइ भनेकै कतिपय रहेको भनेर लेखेपछि धेरैले त्यसलाई हल्काफुल्का रूपमा लिएको पाइन्।
म समाचार सङ्कलनमा जाँदा ओहो हामीलाई दाइ नभन्नूस् भनेको सुनेँ। मलाई लागेको थियो उहाँहरूले यस्तो विषयलाई गम्भीर भएर लिनुहुन्छ भन्ने तर ख्यालठट्टा जसरी उडाउन खोज्नुभयो उनले भनिन्।
मलाई मैले लेखेर ठिक गरेँ कि गरिनँ भन्ने लागिरह्यो। तर त्यो लेखिसकेपछि मलाई निकै हलुका महसुस भयो।
याे पनि पढ्नुस ख्याति कमाएकाहरूलाई ‘मोटो रकमसहित यौन प्रस्ताव’
जुनसुकै पेसा होस् आरोपितको नाम सानै सर्कलमा भए पनि थाहा पाउन गाह्रो हुन्न र खासगरी पीडकले आफूले गरेको कुरा ख्याल गर्छ फेरि दोहोर्यार्उन हच्किन्छ। परिवर्तन बिस्तारै यसैगरी आउने हो उनले भनिन्।
दुर्व्यवहारमा परेका थोरैले बोल्न थालेका हुन्। धेरैको आवाज हामीजस्तो बोल्न सक्नेले उठाइदिनुपर्छ। यो विषयबारे छलफल बहस गर्नुको विकल्प नै छैन अब गौतमले भनिन्।
यी विषय उठ्न थालेपछि नै हामीले त्रिविमा एकजना शिक्षकमाथि यौन दुर्व्यवहारको उजुरी परेको र मण्डला थियटरले एकजना नाट्यकर्मीलाई निलम्बन ग‍र्योर् भन्ने सुन्यौँ।
मैले लेखेकै भरमा चरित्रहीन महिला भन्ने सुन्नुपरे पनि सुन्छु भन्ने मानसिक तयारी गरेरै लेखेको हुँ गौतमले भनिन्।
महिलामाथि हुने यौन दुर्व्यवहार देखाउन मिल्ने वा प्रमाण जुटाउन सकिने खालका हुन गाह्रो पर्छ। त्यसैले पनि हरेक संस्थाले यस विषयमा गोप्य वा सार्वजनिक रूपमै कुरा उठाएर महिलाको भोगाइबारे बुझ्ने र मनन गर्ने गर्नुपर्छ।
याे पनि पढ्नुस किशोरकिशोरी खुलेर गर्छन् यौनका कुरा !
त्यसबारे गौतम भन्छिन्, यसबाट ती मानिसहरू मात्रै सशङ्कित हुनुपर्ने हो जसले शक्तिको आडमा कसैमाथि दुर्व्यवहार गरेका छन्।
त्यसबाहेक त यो विषय उठाउनैपर्छ। यसले कसैलाई बेफाइदा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
एकातिर नामै लिएर पनि केही कारबाही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भने अर्कोतिर महिलाले भनि हाले भोलि विवाह कसरी हुन्छ त्यो महिलाको अथवा उसका परिवाररसमाजले के भन्छन् भन्ने हिच्किचाहटमा हुन्छन् रश्मिला भन्छिन्,
तर त्यसो भन्दैमा हामीले बोलेनौँ भने हामीलाई दुर्व्यवहार गर्ने नै व्यक्तिले अथवा त्यस्तो गलत मनसायका व्यक्तिले हामीलाई जस्तै अबको पिँढीलाई पनि दुर्व्यव
हार गरिरहन्छ। यो समाचार बिबिसीबाट साभार गरिएको हो ।
ट्याग्स: दुर्व्यवहार, यौन